Ny fomba fijerin'ny virtoaly em-120 dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy
fanontaniana Ny fomba fijerin'ny virtoaly em-120 dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy
3 volana 2 herinandro lasa izay #1411 by lvhcus
Rehefa mijery avy ao amin'ny robin virtual em-120 ianao, ny elatra rehetra sy ny loko moto eo amin'ny fiaramanidina rehetra dia mampiseho ny fotsy fototra fototarazony ny loko fotsy. Ohatra, ny fiaramanidina British airways dia manana milina mainty maizin-tselatra saingy avy ao anatin'ilay fiaramanidina virtoaly mijery azy, fotsy. Nanampy ny fanatrehako manokana izay namaky elatra aho, fa indray avy eo anatin'ilay fiaramanidina virtoaly dia fotsy ny elatra. Tsy tsara. Ahoana no ahafahana mamaritra izany?
Fotoana mamorona pejy: 0.186 segondra